चितवनमा चिकनगुनिया भेटियो – Saurahaonline.com
चितवनमा चिकनगुनिया भेटियो
चितवन, ११ असोज । नेपालमा पहिलो पटक चिकिनगुनियाको संक्रमण भेटिएको छ । चितवनको साविकको मेघौली गाविस वडा नम्बर ९ घर भएकी एक महिलामा चिकनगुनिया संक्रमण भेटिएपछि नेपालमा पनि यो रोग भएको पुष्टि भएको हो ।
चिकनगुनिया संक्रमण भएकी मेघौलीकी महिलालाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन नसकेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीले बताए । चितवनमा चिकनगुनियाको जाँच गर्ने किट नभएको भएर पनि अझै कति जनामा यो रोग लागेको छ भनेर भन्न अप्ठ्यारो भएको केसीको भनाइ छ । डेंगु सार्ने एडिस एजिप्टी जातको लामखुट्टेकै टोकाइका कारण चिकनगुनिया पनि लाग्ने केसीले बताए ।
मेघौलीकी महिला काठमाडौँ टेकूमा रहेको शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा पुगेर परीक्षण गर्दा उनलाई चिकनगुनिया पोजेटिभ देखिएको बताइएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालका कल्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन डा. अनुप बास्तोलाले ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीरका मांशपेशी दुख्ने लगायतका विभिन्न समस्या लिएर परीक्षण गर्न पुगेकी ती महिलाको रगत परीक्षणका क्रममा उनमा चिकनगुनिया भएको पुष्टी भएको बताए । डा. बास्तोलाका अनुसार ती महिलाको आवश्यक उपचार पछि घर फर्काइएको छ ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीका अनुसार कार्यालयले डेंगुको संक्रमण देखिएको रत्ननगर, भरतपुरका केही वडा र मेघौली क्षेत्रमा खोज र नष्ट गर अभियान सुरु गर्दैछ । चिकनगुनिया रोग चितवनमा देखिएपनि डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै केसीले झोलिलो पदार्थ धेरै पिउन, घर बाहिर निस्कनु परेमा लामो बाउला भएका कपडा लगाउन आग्रह गरेका छन् । केन्द्रबाट केही दिनमा नै चिकनगुनिया परीक्षणको लागि किट ल्याइने समेत केसीले जानकारी दिए ।